'समयको रङ' भित्रको विविध रङ ~ हाम्रो कलम
'समयको रङ' भित्रको विविध रङ
Wednesday, July 09, 2008 कैलाश3comments
रमेश सफर निरौला
पुस्तकः समयको रङ (Colour of Epoch)
प्रकाशित मितिः २०६४
लेखक/गीतकारः टीका चाम्लिङ
साहित्य जुनसुकै विधाको भएपनि यो पाठकको भित्री हृदय आह्लादित गर्ने किसिमको हुनुपर्छ । लेखन र प्रयोगका नाममा बेतुक शब्दहरू थुपारेर काव्यलाई क्लिष्ट बनाउनु र पाठकलाई भ्रममा पार्दै आफू अव्बल हुन खोज्नु मूर्खता हो । कुनै पनि कृतिमा विविध पाटाको खोजी गर्ने क्रम नेपाली साहित्यको समालोचना विधामा शुरू भैसकेको छ । एक पठनमा वा लेखनमा एक तरिकाले मात्र कृतिलाई हेर्ने आग्रह चक्रव्यूह सञ्चेतनाको छ ।
हाम्रो जस्तो गाउँले भरिएको देशमा गाउँले र स्थानीय विम्वको प्रयोगले रचनालाई मिठासपूर्ण बनाइदिन्छ । तर पाठकले खोजेजस्ता रचना गर्ने रचनाकार औलामा गन्न सकिन्छ । यस्ता रचनाकारहरू मध्ये गीतकार टीका चाम्लिङ समयको रङ नामक गीतिसङ्‍ग्रह माफत गाउँले र जातीय विम्वहरू (Racial images) प्रयोग गर्न तल्लीन छन् । खोटाङको किराँत संस्कृति र चाडपर्वमा चलेका मौलिक शव्दहरू गीतको मिटरमा नार्न सिपालु चाम्लिङ एक सफल गीतकार भएको कुरा त २०६१ सालमा रेडियो नेपालको उत्कृष्ट गीतकार पुरस्कार जित्नुले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । उत्कृष्ट शव्द चयन र तिनको गीतिलयमा सफलतापूर्वक प्रयोग गर्ने उनको शैलीको एक उदाहरण-
यसपालीको साकेलामा खुसेलाई डाक्छु
नजानेको एउटा शिली उसैलाई माग्छु ।
साँस्कृतिक चेतनाले भरिपूर्ण किराँती समाजमा प्रचलित साकेला, उधौली, उभौली मात्र हैन मुर्चुङ्‍गा, बिनायो जस्ता नेपाली लोकबाजाको प्रयोग अत्यन्त मीठो शैलीमा गरेका छन् ठाउँठाउँमा । एउटा छोरो परदेशिदा आमाको पीर कस्तो हुन्छ र उनको दिनचर्या कसरी व्यतित हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र एउटै गीत मेरी आमा ले देखाउँछ । शान्ति भए खुसी हुने नेपाली जातिलाई सुनभन्दा नुन नै प्यारो लाग्ने भनाइ छ उनको गीतमा । इन्द्रेणीको रङ मनपराउने गीतकार इन्द्रेणीको गाउँतिरै फर्कन चाहन्छन् जुन चाहना उनको मात्र नभई आम आन्तरिक र बाह्य आप्रवासी (Diaspora)को समेत हो ।
जनयुद्धकालदेखि शान्ति स्थापना भइसक्दा सम्मका ४४ गीत समेटिएको समयको रङ नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशित छ । यो कृति बिभिन्न समयको नेपाली समाजको रङ पनि हो । ऋतु परिवर्तनसँगै कर्‍याङकुरुङ फर्कनु, आरू फुल्नुले परिवर्तनको आह्वान गर्छ भने आपसी वैमनस्यता त्यागेर एकै मालामा उनिन प्रेरणा प्रदान गर्छ । मान्छेको जिन्दगी भन्नु नै दु:खको सागर हो र सागरसँगै बग्ने हामी पानी हौ, जो जन्मस्थानको पीडाले कर्मस्थानमा दुखेर नियतिको पछि दौडिरहन्छ भन्ने दृष्टिकोण गीतकारको रहेको पाइन्छ । मान्छेको जीवनका विविध पाटा हुन्छन् र तिनको आ-आफ्नो रूप र रङ हुन्छ । यिनै फरक फरक रङको समग्रता (Totality) नै जीवन हो जुन समग्रतामा हेर्न नसकिने हुन्छ । समयको रङमा रङ्गीन गीतकार आफू जस्तै आफ्ना श्रृजना पनि रङ्गीन संसारका रङगविहीन अनुहारको श्रृंगारमा खर्चन चाहन्छन् । यस्तै समर्पण र त्यागले मात्रै नेपाली साहित्य बिनिर्माणवाद (Deconstruction)को बाटोतिर लाग्न सक्छ । बिनिर्माणवाद नेपाली साहित्यको लागि अत्यावश्यक छ ।
hana kailash rai, tapaai kati dherai wata web blog chalaunu hunchha jata heryo tapaai nai tapaai, achamma ani ke ho babbaal nai garne bichar chha ki kaso?
saayad free bhayeko le hola haina?hahahahhahahaha pakhalaa laaglaa hai hos garnush sasto besaaha le ta kahile kaahi pakhaalaa absya lagna sakchha
दिल खोलेर सुझाब दिने दुःख त गर्नु भो तर त्यत्रो दुःख गर्दा किन पो नाम चाहि लुकाएको नि ? मलाई पालो दिने वा Replacement गर्ने विचार भएमा खुलेर आउनुहोला। U R Welcome है नाम नखुलाउने मित्रलाई।
रारासँग मेरो प्रेम
ईश्वरको अदालतमा आउटसाइडरको बयान
इन्टरनेट खोज्ने कसरी ?
गणतन्त्र जनताको जीत बरिलै